PSY-JEUNES / ADOS » Blog Archive » Ados et Sorties
Ados et Sorties
(Lahatsoratra nivoaka an-gazety ny Alarobia 09/02/2011)
Araka ny efa nampanantenaina tato anatin’ny gazetintsika dia hiroso hanatona bebe kokoa ny adolantsento ihany koa ny Jejoo amin’ity taona ity ka ny tao amin’ny Lycée Andohalo no nanombohana izany. Ny lohahevitra « Ados et sorties » no nosafidiana noho ireo tanora mitaraina amin’ny fananana olana amin’ny fivoahana ny trano amin’ny ankapobeny. Ny Dr Raharison (psychothérapeute sy neuropsychiatre) sy Raboussa no namelabelatra ny lohahevitra nianga tamin’ny fanontanian’ireo mpianatra, raha nanentana kosa ny ekipan’ny Jejoo. Zaraina aminao ny famintinana ny zava-nitranga.
Miera hanao « basket » aho dia tsy mahazo satria heverin’ireo Ray aman-dreny fa hanao zavatra hafa?
Rehefa manao hadisoana ao an-trano dia lazaina fa lehibe izahay, kanefa rehefa hoe handeha hivoaka dia lazaina fa mbola kely ?
Diso ve raha mandainga satria tsy avelan’ireo ray amandreny mandeha raha miteny ny marina ?
Fa maninona no rehefa vehivavy no maka ahy ao an-trano dia manakana ny ray aman-dreny ?
Inona no tena mahatonga ny ray aman-dreny handrara anay tsy hivoaka
Ahoana no atao handresena lahatra ny ray amandreny?…
Santionany amin’ireo fanontaniana napetraky ny mpianatra nandritra ny fotoana famelaberana sy fifanakalozan-kevitra ireo. Voabangon’ireo ny ahiahy sy ny “zavatra” tsy azon’ireo tanora mahakasika ny fivoahana ny trano toy ny fandehanana mamonjy fety, anniversaire na programa hafa…
Hevitry ny Matihanina : Dr Raharison Andrianaina
Avy amin’ireo fanontaniana ireo rahateo no nahitan’ny psycho-térapeuthe sy neuro-psychiatre dia ny Dr Raharison fa mbola misy fankatoavana ny Ray amandreny ny tanora Malagasy raha mihoatra ny tanora ivelan’i Madagasikara, izay nambarany fa efa maro no tsy miraharaha izany fierana amin’ny ray amandreny izany akory raha mikasa ny hivoaka. Mbola hita soritra ihany ny fankatoavana ny ray amandreny na dia maniry mafy ny hiaraka amin’ny namana aza.
Nohazavainy ihany koa ny maha samy hafa ny fomba fijerin’ny ray amandreny sy ny tanora. Io moa dia miankina amin’ny fiovana misy eo amin’ny olona rehefa mitombo saina, vatana, fanahy izy. Eo amin’ny fahatanorana dia maniry ny hahita zavatra tsy mbola fahitany taloha (tamin’ny mbola kely) ny olona. Rehefa manan-janaka dia efa any amin’ny fiahiana sy ny fitsinjovana ny ho avin’ny faramandimby no alehan’ny saina. Tsy mahagaga izany raha misy tsy mitovy ny eritreritra sy ny tanjona, eny fa na dia iraisana aza ny fitiavana. Etsy andaniny dia mivoatra hatrany ny teknolojia. Mitondra tahotra ho an’ny ray amandreny sahady ny mety ho voka-dratsin’izany fivoarana rehetra izany.
Fifanakalozana no vahaolana
Anisan’ny vahaolana tsara kosa hoy ihany Dr Raharison ny fifanakalozana na ny “partage”. Resahina amin’ireo ray amandreny ny momba ny namana dieny vao nahazo namana vaovao ohatra ary ampahafantarina azy ireo mihitsy ny mombamomba azy ireo. Ny firesahina sy fizarana dia mampitombo hatrany ny fifampitokisana.
Raha misy fivoahana izany dia resahina mialoha amin’ny ray amandreny. Rehefa voaomana mantsy ny ray amandreny dia mety hanaiky ihany izy ireo. Rehefa azon’izy ireo antoka amin’ny fihetsika sy fomba amam-panao isan’andro fa tompon’andraikitra sy azo itokiana ny zanany dia mora kokoa amin’ny ray amandreny ny manome alalana.
Hevitry ny mpanakanto :
Mpanakanto nasaina tamin’ity andiany voalohany amin’ity tafatafa iarahan’ny Jejoo amin’ny tanora ity i Raboussa izay tsy zoviana amin’ny maro, indrindra amin’ireo adolantsento, fa manana ny toerany eo amin’ny sehatry ny mozika Rap. Ny traikefa hitany teo amin’ny fiainana no niaingan-dRaboussa, nentiny nijoro vavolombelona sy nitondra anatra teo amin’ireo mpianatry ny Lycée Andohalo. Raha fintinina tsotsotra izay nolazainy dia ny hoe tsy misy afa-tsy ny firesahana sy ny fifanakalozan-kevitra ihany no mamaha olana eo amin’ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Aleo, hoy izy, mitsotra ny marina isaky ny hiera hivoaka. Misy mantsy ohatra ny milaza fa handeha hanao « basket » nefa miverina avy any amin’izay aleha dia mamofona toaka. Tsy mahagaga raha tsy matoky intsony ny ray aman-dreny avy eo ka handrara tanteraka ny fivoahana na inona na inona antony. Isan’ny nisongadina tamin’ny voalazan-dRaboussa ihany koa ny hoe : mety ho azo fitahina daholo ny olona rehetra, ny ray aman-dreny, ny mpampianatra sns… fa ny tena no tsy mba azo fitahina mihitsy ary any aoriana any izay vao tena ho tsapa tanteraka izany. Fomban’ny tanora mantsy ny mamorona izao lainga rehetra izao, avy eo faly ery fa tsy tratra. Ireny anefa mazana dia misy akony any aoriana. Araka izany, ilaina ny fahatsorana mba itazonana ny fifampitokisana eo amin’ny tanora sy ny ray aman-dreny.
Hevitry ny mpianatra
Ahoana ny Ray aman-dReninao amin’ny fivoahana ary inona no azonao tamin’ny resadresaka natao teo?
Elodie, 20 taona: Ilaina ny fifampiresahana. Ny alina aho tsy mahazo mivoaka mihitsy. Ny alina koa no tsy mandeha mihitsy.
Lydia, 22 taona: Ny azoko raisina dia ny hoe mila miresaka foana. Dia tsy mandainga koa fa miteny ny marina foana. Rehefa miaraka amin’ny namana fotsiny aho dia tsy mahazo mihitsy na iza na iza.
Narindra, 21 taona: Mila fifanakalozan-kevitra ny Ray aman-dReny sy ny zanaka. Tamin’ny nisy Kat Deluna izao te handeha aho nefa tsy nahazo satria be jiolahim-boto hono any. Rehefa fantatra tsara anefa hoe miaraka amin’ny “cousins-cousines”, na hivoaka “boîte” aza avelany ihany.
Haingo, 17 taona: Mila mifampiresaka. Milaza ny marina foana, izay no vahaolana. Ny azy, ny mivoaka ny trano fotsiny no tsy tiany.
Diamondra, 17 taona: Rehefa mivoaka alina fotsiny dia tsy mahazo mandeha mihitsy. Amin’ny atoandro raha miaraka amin’i zokinay dia mahazo mandeha foana. Ny azoko noraisina teo dia hoe : aleo tsy mandainga.
Andrianiaina, 17 taona: Ny azoko noraisina teo dia ny hoe tokony hanaja ny tenin’ny Ray aman-dReny foana.
Fenosoa, 17 taona: Ny fahitako azy dia mila fifampiresahana foana ny Ray aman-dReny sy ny zanaka. Dia ny filazana ny marina. Rehefa hiera aho dia hilaza ny marina foana.
David, 17 taona: Tokony avela hivoaka foana. Milaza ny marina afa aza mandainga.
Hevitry ny proviseur, Atoa Randriamiarina Yvon Olivier
“Amin’ny maha-olombelona ny tena dia tsorina fa ilaina ny mivoaka, isan’ny zavatra mahafinaritra ny miaraka amin’ny namana, miala voly, miala sasatra. Io fivoahana io ihany koa no ahafahan’ny tanora mahazo fahalalàna amin’ny resaka “savoir-vivre” (fifandraisana amin’ny tontolo hafa). Ny hita anefa dia tena mivoana amin’izay heviny izay ny atao hoe “sorties” amin’izao fotoana. Maro loatra ny andrakandrana ataon’ny ankizy eo amin’ny taoka, sigara, rongony, …izay mitondra vokadratsy betsaka eo amin’ireo tanora, raha tsy ilaza afatsy ny fitondratena hafahafan’izy ireo rehefa avy mandray ireo zavatra ireo ( lasa mahery setra, miroso amin’ny filàna ara-nofo tsy voahevitra,…).
Ilaina ihany koa ny milaza fa tompon’andraikitra feno sy voalohany amin’ny fanabeazana an-janany ny ray amandreny ary ny vahaolana amin’ny olana rehetra dia ny fifaneraserana. Adidin’ny ray amandreny ny mampahafantatra ny loza isan-karazany miandry an-janany amin’ny zavatra tiany atao, ary ny fitaizana dia mety kokoa raha miainga amin’ny zavatra tian’izy ireo. Ilaina araka izany ny mifanerasera amin’ny zavatra rehetra, ary tokony hitovy hevitra hatrany ireo ray amandreny amin’ny fitaizana mba tsy hisian’ny “conflit” indray.
Hamaranako azy dia mampianatra tsikelikely ny ankizy hahaleo tena ny “sorties”, ary raha manaraka tsara ny toromarik’ireo ray amandreny ny ankizy amin’izany dia hitombo kokoa ny “autonomie” sy “liberté” ananany (amin’ny lafiny tsara).
Isaorana ny Lycée Andohalo manontolo, ny Dr Raharison Andrianaina, Raboussa, ny Luminelle Beauté etsy Behoririka noho ny nahatontosàna antsakany sy andavany ity JEJOO ADO voalohany ity. Ao amin’ny Lycée Jean Joseph Rabearivelo ny fotoanantsika manaraka amin’ny volana Martsa.